Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Caawa Oo Talaado Ah Ee Ay Qoreen Wargeysyada & Saxiixyadii La Dhameystiray Maanta - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Caawa Oo Talaado Ah Ee Ay Qoreen Wargeysyada & Saxiixyadii La Dhameystiray Maanta
RASMI: Goolhaye Joe Hart ayaa dhameystiray ku biiritaankiisa kooxda Tottenham isagoo u saxiixay heshiis labo sannadood ah. Wuxuu kursiga keydka u fadhin doonaa goolhaye Hugo Lloris.
RASMI: Goolhaye Claudio Bravo ayaa si rasmi ah uga tagay Manchester City ka dib afar xilli ciyaareed uu kooxda joogay isagoo ku dhow inuu ku biiro kooxda Real Betis.
RASMI: Real Madrid iyo Granada ayaa heshiis ka gaaray in daafaca Real Madrid Jesus Vallejo uu amaah ku sii joogo kooxda Anduluusiya ka dhisan.
Bayer Leverkusen ayaa ku adkeysaneysa go’aankeeda la xiriira xiddiga garabka ka ciyaara Kai Haverz iyadoo u sheegay Chelsea inay bixiyaan 90 milyan ginni ama inay ka quustaan saxiixiisa. (London Evening Standard)
Xiddigii hore ee Chelsea Pedro ayaa tijaabada caafimaadka u maraya kooxda AS Roma, si kastaba lama filayo in xiddigii hore ee Barcelona lagu dhawaaqi doono heshiiskiisa ilaa iyo isbuuca danbe. (Tuttomercato)
Xiddiga diidan inuu qandaraas cusub u saxiixo Bayern Munich ee David Alaba ayaa Premier League u soo wareegi kara labada isbuuc ee soo socota iyadoo daafaca boosaska badan ka dheeli kara ay ku tartaamayaan saxiixiisa Manchester United iyo Chelsea halka Man City ay ka quusatay saxiixiisa. (Sky Sports)
Agaasimaha kooxda Lazio Igli Tare ayaa weerar ku qaaday David Silva ka dib markii uu halyeeyga Man City ku biiray Real Sociedad bedelkii uu u wareegi lahaa kooxda Talyaaniga. Silva ayaa daqiiqadii ugu danbeysay ka baxay heshiiska Lazio isagoo u wareegay Sociedad.
Igle Tare ayaa warbixin uu ka soo saraay Silva wuxuu yiri: “Waxaan maqlay in David Silva uu u wareegay Real Sociedad. Ixtiraam weyn ayaan u hayaa ciyaaryahanka laakiin raganimo ahaan ixtiraam uma hayo”
Gabadha maamusha suuqa kala iibsiga Chelsea Marina Granovskaia ayaa ogolaatay tababare Frank Lampard inuu la soo wareego seddexda daafac ee kala ah Ben Chilwell, John Stones iyo Lewis Dunk. (Daily Star)